अक्सफोर्डले किन रोक्यो कोरोना भ्याक्सिनको परीक्षण ? - Vishwa News
अक्सफोर्डले किन रोक्यो कोरोना भ्याक्सिनको परीक्षण ?
September 9, 2020 ० बिचार / प्रतिक्रिया
लण्डन । अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणको काम स्थगित गरेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा उत्साहजनक नतिजा आएको परीक्षण तेश्रो चरणमा पुगेपछि रोकिएको छ । बीबीसीका अनुसार परीक्षणका दौरान एक जना व्यक्ति विरामी भएपछि तत्कालका लागि परीक्षण रोक्ने निष्कर्षमा विश्वविद्यालय पुगेको छ ।
अक्सफोर्डले एस्ट्राजेनेसँग मिलेर खोप निर्माणको काम गरिरहेको छ । विश्वभर परीक्षणका काम भइरहँदा यहाँ प्राप्त सफलताले उत्साह थपेको थियो । एस्ट्राजेनेकै सल्लाहमा रोकिएको र यो नियमित काम भएको बताइएको छ । परीक्षणमा सामेल व्यक्ति विरामी हुनुको कारण पत्ता लागेपछि पुनः परीक्षणको काम अगाडी बढ्ने बताइएको छ ।
अक्स्फोर्डको खोप विश्वका अन्य स्थानको तुलनामा छिटो बजारमा आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ । अक्स्फोर्डको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण ३० हजार मानिसमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले लेखेका छन् । यो संसारका थुप्रै मुलुकमा एकै पटक हुने गर्छ ।
सोहीकारण अहलिे संसारभर नै परीक्षण रोकिएको छ । अन्य कारणले मानिस बिरामी भएपनि परीक्षण भइरहेको मानिस बिरामी पर्दा परीक्षण रोकिनुलाई विज्ञहरुले भने सामान्य प्रक्रिया मानेका छन् ।
थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ३२२ पुग्यो
वैदेशिक रोजगारी थप खुकुलो, माग आएमा नयाँ कामदार पनि जान पाउने
मध्यावधी निर्वाचनले ट्रम्पलाई धक्का, केन्टकीको गभर्नर गुम्यो, भर्जिनियाको दुबै सदनमा डेमोक्र्याट
उपत्यकामा दुई छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, तीन घाइते
बहराइनका राजकुमारसहित १८ जनाको टोलीले लियो आरोहण अनुमति
नेपालमा उच्च वर्षा, सतर्क रहन आह्वान
आइपीएल : चेन्नईलाई राजस्थानले हरायो
हुम्लामा नेपाली भूमिमा भवन नबनाएको चीनको स्पष्टिकरण
अमेरिका बन्यो विश्वमा नै कोरोनाबाट मृत्‍यु हुने संख्यामा नम्बर एक; दुईलाख कट्यो
आङरिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने
बुधबारदेखि साझा यातायातका लामो दूरीका बस चल्ने
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञामा परिवर्तन, जोरबिजोर कायम
राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गौतमले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ